» फोटो फिरिम -२” को यति राम्री डक्टर मिडियामा ! बिरामी हरु यिनको रुप हेरेरै निको हुन्छन् ,(हेर्नुहोस भिडियो) फोटो फिरिम -२” को यति राम्री डक्टर मिडियामा ! बिरामी हरु यिनको रुप हेरेरै निको हुन्छन् ,(हेर्नुहोस भिडियो) – हाम्रो खबर
फोटो फिरिम -२” को यति राम्री डक्टर मिडियामा ! बिरामी हरु यिनको रुप हेरेरै निको हुन्छन् ,(हेर्नुहोस भिडियो)
“भिडियो तलको समाचार को अन्त्य मा छ कृपया पुरा हेर्नुहोला।
“सरकार ढा,ल्ने खेल भयो, सबै जनता प्रतिवादमा उत्रौैँ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले वर्तमान ओली सरकार ढा,ल्ने खेल सुरु भइरहेको भन्दै सबै जनता प्रतिवादमा उत्रिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकार ढा,ल्ने खेल भइरहेको भन्दै उक्त गलत क्रियाकलापवि,रु,द्ध सबै जनता प्रतिवादमा उ,त्रिनुपर्ने बताउनुभयो ।”
“उहाँले भन्नुभयो, ‘बीचमा नै अनेक खालको जालझेल गरेर सरकार ढा,ल्ने फेरि नयाँ बनाउने, नयाँ खेलोमेलो गर्ने काम शुरू भयो भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ । विकास र निर्माणका काम पनि रोकिन्छन् । समाजमा भद्रगोल सिर्जना हुन्छ । अहिले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा विकृतिहरू, विसंगतिहरू देखा पर्न खोज्दैछ । सरकार ढा,ल्ने, सरकार ढा,ल्ने खेलमा लाग्ने । राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका नराम्रा कुराको वि,रो ध गर्नु जरुरी छ ।’
“सही कुराको पक्षमा गलत कुराको वि रु द्धमा सबै जनताले ख,बरदारी गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । ‘यो काम पनि हामीहरूबाट होस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु । जनतामा निराशा फैलाउने र अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने प्रयास भयो भने यो राम्रो हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सधैँ बस्छु भनेर हिजो नि रं कु श राजाको बेलामा जस्तो त होइन । एउटा अवधिसम्म बस्ने हो । त्यो अवधिसम्म राम्रो काम गर्‍यो भने जनताले पुरस्कृत गर्छन्, राम्रो काम भएन भने जनताले द ण्डि त गर्छन् । यसलाई त हामीले मानेको हो नि !’
“जनताले सही र गलत क्रियाकलाप छुट्याएर हर क्षेत्रमा देखिएको गलत कार्यवि रु द्ध प्रतिवाद गर्नुपर्ने पनि उहाँको जोड रहेको छ । निश्चित समयावधिसम्मका लागि निर्वाचित भएर आएको सरकार बीचमै ढाल्ने प्रयास भए मुलुक र जनताका लागि ठूलो दु र्भा ग्य हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।”
“यसैगरी सरकारका राम्रा काम र कमजोरीको हिसाबकिताब चुनावमा देखिने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । तर, बीचमै सरकार ढा ल्ने, जनतामा निराशा फैलाउने र अस्तव्यस्त सिर्जना गर्ने प्रयास भए राम्रो नहुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।पछिल्लो समय मुलुकमा देखापरेको राजनीतिक खिचातानीले कामै गर्न नसकिने वातावरण सिर्जना भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँका अुनसार स्थिर सरकार भए मात्र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र विकासका काम गर्न सकिन्छ ।”